Khilaafka biyo-xireenka iyo Trump: Sida uu MW Trump “u khiyaamay” Itoobiya! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Khilaafka biyo-xireenka iyo Trump: Sida uu MW Trump “u khiyaamay” Itoobiya!
(Hadalsame) 28 Okt 2020 – Dadka naqdiya madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegaya in xisaada cirka isku sii shareereysa ee Masar iyo Itoobiya ay muujineyso in ay jirto guuldarro weyn oo maamulka Trump uu sababay taa oo la xiriirta diblomaasiyadda Afrika iyo Marekanka.
Labadan dal ee Itoobiya iyo Masar oo hadda uu u dhexeeyo khilaaf adag oo dhanka biyo-xireenka Niil uu u dhexeeyo, waxay muddo xulafo la ahaayeen dalka Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore weriyayaasha Aqalka Cad u sheegay: “Waa xaalad aad halis u ah sababtoo ah Masar sidaas ugama samri karto arrinta.”
“Ugu dambayntii biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waan sheegay kor ayaanan u dhahayaa – biyo-xireenkaas way burburin doonaan, waana inay wax sameeyaan,” ayuu hadalka sii raaciyay Trump.
Madaxweyne Trump intaas kuma uusan ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar ay arrintaasi ka seexatay: “Waa hore in uusan bilaaban ayey aheyd, waxay ahayd in ay joojiyaan,” ayuu yiri.
Trump ‘hogaamiye nayceyb u qaba dadka reer Itoobiya’
Rashiid Cabdi oo falanqeeya amniga Geeska Afrika ayaa sheegay in dhex-dhexaadinta Mareykanka ee la xiriirta khilaafka biyo-xireenka ee Itoobiya iyo Masar ay xaaladda uga sii dartay.
“Itoobiya waxay xoojineysaa amniga hareeraha biyo-xireenka,” ayuu yiri Cabdi.
Marka la dhameystiro biyo-xireenka oo $4 bilyan oo dollar lagu bixiyay, wuxuu noqonayaa midkii ugu waynaa ee AFrika ee koronto laga dhaliyo.
Rashiid ayaa sheegay in taasi ay muujineyso in Trump uu ku guul dareystay fahanka sida ay diblomaasiyadda caalamka u shaqeyso.
“Wuxuu si khaldan u fahmay qaabka looga baxo xiriirka ganacsiga, marka sidaa darteed waxa uu shaqadii dhex-dhexaadinta labada dal ku daayay wasaaradda maaliyada, taasi oo gabi ahaanba lid ku ah siyaasadda arrimaha dibadda,” ayuu yiri Rashiid Cabdi.
Horraantii bishii Sibteembar ayey aheyd markii dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday in ay dhaqaalaha gargaarka ah ka jari doonto Itoobiya, arrintaas oo salka ku haysay biyo-xireenka ballaaran ee uu dalkaas ka dhinac dhisayo Webiga Niil-ka buluugg ah.
Hadalkaas wuxuu ka dhashay go’aanka ay Itoobiya ku buuxinayso biyo-xireenka wayn, ka hor inta aanay wax heshiis ah la gaarin dalalka Masar iyo Suudaan.
“Itoobiya waxay dareemeysaa in Mareykanka uu khiyaameeyay ,Trump-na waa hogaamiye “haatan neceb dadka reer Itoobiya.”
Wuxuu intaasi ku daray in Itoobiya ay jeceshahay in Joe Biden uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3-da Nofeembar.
Maxay tahay sababta uu Trump ula saftay Masar?
Maaddaama Masar ay xiriir diblomaasiyadeed oo soo jireen ah la lahayd Israa’iil, maamulka Trump marnaba kama soo horjeedsan karo Masar, weliba xilli ay u baahan tahay caawimaadda Mareykanka.
Waxaa la aaminsan yahay in madaxweynaha Masar, Cabdifitaax Al- Sisi uu u ololeeynayo si dowladaha kale ee Carabta ay u aqoonsadaan maamulka Israa’iil. Marka sidaa darteed maamulka Trump wuxuu ku khasbanaaday in uu Masar taageero.
Maamulka ayaa xoogga saaraya wanaajinta xiriirka Israa’iil iyo Carabta, waxaana Trump u suurogashay in Suudaan uu ku qanciyo in ay xiriirka Israa’iil loo celiso, iyadoo doorashada Mareykanka ay ka dhimantahay muddo ka yar isbuuc.
Shacabka Sudan waxay ka dibadbaxeen qiimaha sareeya ee nolosha, waxayna caddaalad u raadinayaan dadkii dhibaatada uu u geystay maamulkii hore.
Previous articleFALANQAYN QODAN: Danaha shakhsi ee ku dhex jira heshiiska dhex maray Israel iyo dowlado Carbeed
Next articleWargayskii horay u daabacay kartuunkii lagu xumaynayey Nabiga (NNKH) oo maanta sameeyey mid kale oo lagu caayayo Erdogan & haweenka Muslimka ah